Shaacinta Natiijada Doorashadii Koongo oo Dib Loo Dhigay | Baligubadlemedia.com
Shaacinta Natiijada Doorashadii Koongo oo Dib Loo Dhigay
Guddiga doorashooyinka DRC Congo ayaa shaaciyay in ay dib u dhigeen Shaacinta Natiijadda doorashadii dhawaan ka dhacay dalkaasi.
Iyada oo ay isa soo tarayaan baaqyada lagu doonayo in lagu shaaciyo natiijada doorashadii madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Koongo ka dhacday, ayaa saraakiishu sheegeen in aan maanta oo Axad ah lagu dhawaaqayn.
Gudoomiyaha gudida doorashooyinka ayaa sheegay in sababtu tahay iyada oo kala bar in ka yar waraaqihii codadka lagu dhiibtay ay soo gaareen xarunta.
Kaniisadda Kaatoligga, oo kumanaan goob joogayaal ah u dirtay goobaha codbixinta, ayaa Khamiistii sheegtay in cidda guulaystay ay iska caddahay, waxaa ay ku baaqday in natiijada la shaaciyo si looga baaqsado xasilooni darro siyaasadeed.
Kaniisaddu waxay mucaarad cod dheer ku ahayd mudo kordhinta xukunka Madaxweyne Joseph Kabila.
Waxa uu haatan xilka ka degayaa 17 sannadood oo uu xilka hayey ka dib waxaanu ballan qaaday inuu suurto galin doono nin markii ugu horraysay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo xilka hab sharciga waafaqsan loola kala wareegi doono tan iyo markii ay gobanimada ka qaadatay Belgium 19960-kii.